Drupal Tips, Tricks, Articles, Useful Resources & Information | mmshare
Drupal Tips, Tricks, Articles, Useful Resources & Information
Drupal7Theming Tutorials and Resources
Submitted by everlearner on Sun, 01/29/2012 - 06:09
If you are using Drupal for one of your website, if you areadeveloper oradesigner using Drupal for your web projects, this collection of Drupal7theming resources is for you. If you are starting to learn Drupal, it is also important to get useful resources. This collection also can help you to get useful information easily.
Read more about Drupal7Theming Tutorials and Resources
Submitted by everlearner on Sat, 11/19/2011 - 06:59
Facebook မှာ ညီလေး NYA က မေးထားတဲ့ Taxonomy နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းလေးနဲ့ ကျွန်တော် ပြန်ဖြေထားတဲ့ အဖြေကို ကျန်တဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေလဲ သိရအောင် ဒီမှာ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကလည်း သူ့အတွေ့အကြုံအရ အမှန်တကယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာဆိုတာ သိသာသလို ကျွန်တော်လည်း Drupal ကို စလေ့လာကာစက ကိုယ်တိုင် ဒီလို အခက်အခဲမျိုး ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီကနေ Taxonomy ကို ပိုနားလည်လာတဲ့ နောက်မှာ ကျန်တဲ့ သူတွေလည်း အခက်အခဲ မရှိရအောင် Understanding Taxonomy For Information Architecture in Websites and Drupal CMS ဆိုပြီး ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းပါးကို Facebook မှာ Share လိုက်တော့ ညီလေး NYA က Comment ထဲကနေ အခုလို မေးပါတယ်။
Read more about Multiple Content Types OR Multiple Taxonomy, What is the best solution in Drupal way?
Submitted by everlearner on Sun, 10/02/2011 - 12:12
Website တည်ဆောက်နေတဲ့ Developer, Website Owner တစ်ဦးအနေနဲ့ တစ်ခါတလေ ဝက်ဘ်ဆိုက် ယိုယွင်းပျက်စီးသွားတာ၊ မတော်တဆ မှားပြီး ဖျက်မိတာ ဒါမှမဟုတ် ပုံပျက်ပန်းပျက် ချွတ်ယွင်းသွားတာမျိုးတွေ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် ကြုံကောင်း ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေဆိုးနဲ့ ကြုံလာရပြီဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းဖို့ နည်းကတော့ ကြိုတင် သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Backup file တွေကနေ Restore ပြန်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about Backuping Drupal Database and Files With Backup & Migrate Module or Drush
Read more about Drupal and CMS Best Practices